Izinzuzo ezi-4 zenqubo yokukhiqiza ifilimu ekhanyayo yebhokisi lendwangu engu-3M
I-3M yinkampani emhlabeni enikezela ngemikhiqizo ephelele yezimboni zokukhangisa nezokusayina. Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe, kube nezinkampani eziningi ezaziwayo emhlabeni zokusebenzisana kwesikhathi eside. Okulandelayo isingeniso sezinzuzo ezine zebhokisi lokukhanya elingu-3M ...
Indlela yokukhiqiza yesikrini se-3M light box, ukuthi ungayifaka kanjani indwangu yebhokisi elikhanyayo le-3M
1. Indlela yokunamathisela eyomile yokuthi ungayifaka kanjani indwangu yebhokisi elikhanyayo Empeleni, kungukunamathisela ngqo ifilimu kokuqukethwe okunamathiselwe, unamathisele unamathisele owomile, ibanga lokusakaza namanye amafilimu wokumaka amancane kakhulu. Kunconywa ukuthi kusetshenziswe ungqimba wephepha lokumisa elikhethekile ebusweni. Ungadabuli ...
Kubangani abafuna ukwenza izimpawu zendwangu yebhokisi elikhanyayo le-3M, okukhathazeka kakhulu yinani, malini imitha lesikwele, uma lidlula isabelomali sabo, noma uma ikhwalithi yinhle, kufanele banqikaze ukuyisebenzisa. Kodwa-ke, uma ubuza inani elingalungile, okuholela ekushiyekeni ukusetshenziswa kwezinto ze-3M ...